Etu esi egwu vidiyo na YouTube | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi egwu vidiyo na YouTube
O nweghị onye gbanahụrụ ya YouTube bụ isi nyiwe ebe anyị nwere ike ịchọta ụdị vidiyo ọ bụla anyị na-achọ. Yahoo na-anwa imepụta ikpo okwu ohuru ruo oge ụfọdụ, na-adọta ndị na-egwu egwuregwu ka ikpo okwu wee nwee ọsọ ọsọ na-ewu ewu mana ugbu a, n'agbanyeghị na ọ zụtara ọtụtụ ụlọ ọrụ maka ya, ọ nwebeghị ihe ịga nke ọma.
Izu ole na ole gara aga anyị kọwara otu esi emeghachi vidiyo na YouTube na 1 uzo. Na nke a, anyị ga-enye gị ụzọ ọzọ maka inwe ike ịnọgide na-emegharị vidio anyị ọkacha mmasị na YouTube. N'okpuru ebe anyị na-enye gị ihe ọhụrụ ndị ọzọ
Nhọrọ 1. Mepụta ndepụta egwu.
Ihe dị mma gbasara ịgbakwunye vidio na ndepụta ọkpụkpọ omenala bụ na ọ na-enye anyị ohere ịgbakwunye usoro ịmegharị ma ọ bụ na-enweghị usoro. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ naanị na ị nwere otu vidiyo agbakwunye na ndepụta gị, ọrụ nke na-aga n'ihu playback mode bụ otu. Mana ihe niile nwere ihe ọ bụla na nke ahụ bụ na ịmepụta ndepụta maka vidiyo ọ bụla anyị chọrọ igwu egwu mgbe niile nwere ike ịdị ntakịrị.
Nhọrọ 2. Jiri ndọtị ihe nchọgharị.
Mgbakwunye ihe nchọgharị na-enye anyị ohere itinye ọrụ ndị ọzọ na-enweghị nke ndabara ma nye anyị ohere itinye ọrụ bara ezigbo uru. Nwere ike jiri ndọtị ndị ọzọ iji kpọọ vidiyo YouTube na-akpaghị aka. Iji mee nke a, ị ga - agbaso usoro nke m kọwara n'okpuru:
Mepee ihe nchọgharị Chrome na Budata Nchekwa onwe na ntanetị maka ndọtị YouTube.
Ozugbo arụnyere, ndọtị ga-agbakwunye bọtịnụ na YouTube a na-akpọ Replay, nke ị ga - ahụ n'etiti nhọrọ About na Share.
Ozugbo anyị pịa Replay, menu ga-egosipụta ebe anyị nwere ike hazi ma anyị chọrọ igwu otu akụkụ nke vidiyo na-aga n'ihu ma ọ bụ kpamkpam. Ozugbo anyị ahọpụtara nhọrọ anyị chọrọ, pịa Loop ya.
Mgbe ahụ vidiyo ga-amalite igwu egwu na-akpaghị aka, na ozugbo ọ gwụchara ọ ga-amalite igwu egwu ọzọ.
Anyị nwekwara ike iji aghụghọ a dị mfe gee egwu dị na ọtụtụ puku vidio egwu na YouTube. Buru n’uche nke ahụ ndọtị a dị maka Chrome. Ihe ozo di nma bu budata YouTube vidiyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu esi egwu vidiyo na YouTube
150 video egwuregwu curiosities na ma eleghị anya, ị maghị
Nyocha: Mortal Kombat